हराएका जोन तामाङ ६ दिनपछि यस्तो अवस्थामा भेटिएका थिए
काठमाडौं । स्कुलका शिक्षक र साथीसहित हाइकिङ गएका १७ बर्षीय जोन तामाङ ६ दिनदेखि हराइरहेको खबर पाएपछि ‘रेस्क्यू थ्री साउथ एसिया’का १८ जना उद्धारकर्तासँगै क्षेत्रीय निर्देशक चन्द्र आले बुधबार बिहन फूलचोकीको डाँडामा पुगे । सकुशल उद्धार गर्न सकिए हुन्थ्यो भन्ने मनमा गहिरो चाहना र अठोटसहित चन्द्र र उनको टिमले बुधबार विहानैदेखि जंगल चाहार्न सुरु गर्यो।
जोनलाई सकुशन उद्धार गर्न सकिएला ? चन्द्र आशावादी थिए तर पूर्ण विश्वस्त हुन कठिन थियो । किनकि जोन हराएको छैठौं दिनमा उनी खोजीका लागि जाँदै थिए । बिहानदेखि सुरु भएको खोजी अभियान जारी थियो । उनका साथीहरु डाँडाका विभिन्न स्थानमा छरिएका थिए । प्रहरी र सेनाले खोजी गरिसकेको क्षेत्र छाडेर नयाँ ठाउँमा टोली परिचालित भयो । चन्द्र र उनको १८ जनाको टिम जोनको कुनै संकेत पाउने आशामा डाँडाका कठिन पखेराहरु छिचोल्दै थिए ।
मध्य दिउँसो भइसकेको थियो । अचानक उनका आँखा एउटा आकृतिमा पर्यो । मानवजस्तै देखिने आकृति देखेपछि उनी नजिकै गए । त्यहाँ एक किशोर लडिरहेका थिए । आफूलाई बताइएको जोनको हुलियासँग ती किशोरको हुलिया मिलेपछि चन्द्रले बोलाए ‘जोन…’ किशोरको शरीरमा हलचल भयो । सँगसँगै चन्द्रको मनमा खुसीको संचार भयो – उनी जीवीतै रहेछन् ।
झाडी पन्छाउँदै चन्द्र नजिकै पुगे । जोनले विस्तारै आँखा खोले र भने ‘पानी…’। चन्द्रले उनलाई अंगालो हाले । अनकण्टार जंगलमा जीवनका लागि मृत्युसँग संघर्ष गर्दै रहेका जोन एक्कासी भक्कानिए । चन्द्रले उनलाई सान्त्वना दिए । पानी र बिस्कुट दिए । वायरलेस सेट निकाले र आफ्नो साथीहरुलाई खबर गरे ‘जोन इज सेफ…।’
भेटिएको ठाउँबाट बोकेर तल ल्याउन करिव ४ घण्टा लाग्यो ।
जोनलाई अहिले बी एण्ड बी अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।
चन्द्र आले र उनको रेस्क्यु टिमसँग गरिएको भिडियो संवाद प्रतिक्षा गर्नुहोस्।
कस्तो अवस्थामा भेटिएका थिए जोन हेर्नुहोस् तलको भिडियोमा
गुल्मीमा यसरि यस्तो अवस्थामा भेटिएका थिए सचिन परियार हेर्नुहोस पहिलो भाइरल भिडियो, बाटोमा गीत गाउदै, खेल्दै
पोखरा संसद प्रकरण ः चरकको कोभिड वाडमा यस्तो अवस्थामा छन् हराएका सांसद खिम विक्रम, मुख्यमन्त्रीले समेत भेट्न पाएनन् (भिडियो)
फेरी निर्मला पन्तलाई सम्झाउने घटना घट्यो बैतडीमा, कक्षा १२ मा पढ्ने किशोरी यस्तो अवस्थामा भेटिईन्, कसरी भयो यस्तो ? हेर्नुहोस माघ २५ गतेका मुख्य समाचारहरु